Tantara - Boky faharoanny Tantara, Boky voalohanny Tantara,
ⓘ Tantara - Boky faharoanny Tantara, Boky voalohanny Tantara, Bokinny Tantara, Boky ara-tantara, Baiboly, Voajanahary, Vikram Samvat, Testamenta Taloha ..
Tantarani Alemaina Tantarani Etazonia Tantarani Madagasikara Tantarani Polonia
Ny Boky faharoan’ny Tantara na Tantara faharoa dia boky ao aminny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly kristiana sady hita koa ao aminny Tanakh, boky masinny jodaisma. Ampahany aminny boky nozaraina roa io boky io, dia ny Bokinny Tantara, ka ny tapany voalohany dia ny Boky voalohanny Tantara. Manomboka aminny tantarananny fanjakani Solomona ny boky. Avy eo mitantara ny nivakisan’ny fanjankana ho roa: Fanjakan’i Jodà any atsimo sy Fanjakan’i Israely any avaratra. Derainny mpanoratra ho ilay mpanjaka tonga lafatra i Solomona na Salômôna ao amin’ny boky. Voaresaka ao aminny Boky faharoan’ny Ta ...
Ny Boky voalohanny Tantara na Tantara voalohany dia boky ao amin’ny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly kristiana sady hita koa ao amin’ny Tanakh, boky masinny jodaisma. Ampahany aminny boky izay nozaraina roa io boky io, dia ny Bokinny Tantara, ka ny tapany faharoa dia ny Boky faharoanny Tantara. Ireo boky ireo dia manazava ny tantaranny Fanjakani Israely sy ny Fanjakani Joda hatraminny famoronana ani Adama izay asehony aminny fomba hafa raha ampitahaina aminny voalaza ao aminireo Bokini Samoela sy ireo Bokinny Mpanjaka na dia misy tantara izay hita fa naverinny mpanoratra tantaraina. Ny ...
Ny Bokin’ny Tantara dia horonam-boky na boky ao amin’ny Baiboly jiosy, ka ny fizaràna azy ho roa no niavian’ny Boky voalohanny Tantara sy ny Boky faharoanny Tantara ao amin’ny Baiboly kristiana ankehitriny. Io boky io dia manazava ny antony nizarànny fireneni Israely ho roa ka niteraka ny Fanjakan’i Isiraely any avaratra sy ny Fanjakan’i Jodà any atsimo, ka atombony hatramin’ny famoronana an’i Adama izany ka mifarana aminny fahababoanny Jiosy sy ny fivereneny indray an-tanindrazana.
Ny boky ara-tantara na bokin-tantara dia fitambarana boky ao aminny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly izay mirakitra aminny ankapobeny ny tantaranny Zanaki Isiraely tao aminny tany Kanana hatrany aminny fahababoany tany Babilona. Ireto avy ireo boky ireo: Josoa na Jôsoe, ny Mpitsara, ny Rota, ny Samoela voalohany, ny Samoela faharoa, ny Mpanjaka voalohany, ny Mpanjaka faharoa, ny Tantara voalohany, ny Tantara faharoa, ny Ezra na Esdrasa ny Nehemia ary ny Estera. Ny Baiboly katolika dia ahitana boky deoterokanonika dia ny Tobià, ny Jodita ary ny Makabeo voalohany sy ny Makabeo faharoa. Ao ...
Ny Naturalis Historia, izay azontsika dikaina hoe Tantara Voajanahary aminny fiteny malagasy dia asa soratra izay mirakitra anaty volume 37 nosoratani Pliniosy Ilaibe, izay tia nanangona fampahalalana betsaka indrindra mahakasika ny kolontsaina aminny ankapobenny olom-pirenena romana izay manan-kolontsaina. Nahatsiaro saina i Pliniosy fa fohy ny fe-potoana iainanny olombelona, ary noho izany tokony ampiasainy tsara izay fe-potoana ananany izay mba tsy hahakely ny fahafahany mianatra. Na dia anisanny asa soratra feno indrindra avy aminny Taona latina Taloha aza io zavatra io, tsy hita ny fi ...
Ny Vikram Samvat na Tetiandro Vikramy dia tetiandro ara-tantara hindo, manara-bolana sy masoandro, nampiasaina ao aminny zana-kontinenta indiana. Io no tetiandro ôfisialin i Nepaly. Ampiasaina ao aminny fanjakana maro ao India ity tetiandro ity. Ireto ny anaram-bolana ao aminio tetiandro ioː Kārtikā Oktobra–Novambra Jyaiṣṭha Mey–Jona Pauṣa Desambra–Janoary Vaiśākha Avrily–Mey Bhādrapada Aogositra–Septambra Chaitra Marsa–Avrily Srāvana Jolay–Aogositra Asvinā Septambra–Oktobra Phālguna Febroary–Marsa Māgha Janoary–Febroary Agrahāyaṇa Novambra–Desambra Asādha Jona–Jolay
Atao hoe Testamenta taloha ny fitambaranny boky ao aminny Baiboly voasoratra talohani Jesoa Kristy. Ny Kristiana dia mampiasa anio teny io hanondroany ny tapany voalohany aminny Baiboly, izay voasoratra talohani Jesoa Kristy sady antsoinny Jiosy hoe Tanakh. Ny Vavolombeloni Jehovah dia miantso ny Testamenta Taloha hoe Soratra Hebreo sy Aramianina".
Ny Empira Jermanika Masina na Empira Romana Masina na Firenena Jermanika na Empira Masina Rômana Jermanika Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation aminny teny alemàna, Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ aminny teny latina dia firaisana ara-politika ny tany ny Eoropa Andrefana sy Afovoany taminny Andro Antenantenany, ary entinny mpitondra romana jermanika. Ny Empira Masina Rômana Jermanika dia naorini Othon I Lehibe taminny taona 962 sy noravani Napoléon I taminny taona 1806. Indraindray izy dia atao hoe Reich voalohany. Nitondra izany anarana izany io empira io nanomboka aminny ...
Ny Empira Rômana dia ny empira lehibe indrindra taminny Andro Taloha. Ny renivohiny dia i Rôma ary mifototra aminny tany manodidinny Ranomasina Mediteranea ilay empira. Nitoetra nanomboka taminny 27 tal. J.K. hatraminny fanonganana ny emperora farany taminny taona 476 ny Empira rômana. Ny Empira no sokajy fahatelonny Rôma Taloha. Taona fahampanjaka ny voalohany, faha repoblika ny faharoa ary faha empira ny sokajy fahatelo. Ny teny ofisialinny Empira rômana dia teny latina. Na dia izany aza, nitazona ny fiteny grika taloha ho fiteny ofisialy miaraka aminny fiteny latina ny faritra atsinanan ...
Ny T antara ny Andriana eto Madagasikara dia bokinny lovantsofina tao aminny FanjakanImerina, izay nagoninny mompera François Callet sy navoakany teo anelanelanny taona 1878 ary 1881. Avy aminny bokinny mompera F. Callet ny ankamaroanireo zavatra fantatra mikasika ny mpanjakanImerina. Ny Tantara ny Andriana dia ny loharano ifotoran izay mandinika ny tantaranImerina.
Rainer Maria Rilke dia mpanoratra, Poeta, mpanoratra tantara tsangana, mpanoratra tantara lava mizaka ny zom-pireneni Alemaina, Aotrisy teraka ny 4 Desambra 1875 ary maty ny 29 Desambra 1926
Miguel de Cervantes dia mpanoratra tantara lava, mpanoratra tantara tsangana, Poeta, mpanoratra, mpanao asa soratra, miaramila mizaka ny zom-pireneni Espaina teraka ny 9 Oktobra 1547 ary maty ny 22 Aprily 1616 tao Madrid
Ny Barselona dia tanàna any Espaina, Izy no renivohitra ny Katalonia. Izy koa ny renivohitra ny faritanny Barselona, sady renivohitra ara-tantara sy ekonomika ny Katalonia koa izy.
Krizinny Timaoro Antsinanana taminny 1999
Ilay Krizy ny Timaoro Antsinanana taminny taona 1999 dia nanomboka taminny fiaikananny militanta tsy ho anny fahaleovantena aminny olona tsy miady, ary lasa nivelatra taminny ady jeneraly tao anatinny firenena iray manontolo, tao aminny renivohitra Dili. Nahatratra 1.400 tany ho any ny olona maty nandritry ny ady. Tonga tany ny Firenena Mikambana InterFET mba handamina.